Puntland oo Maanta xukun kale ku riday Nin horey loo Maxkamadeeyay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Puntland oo Maanta xukun kale ku riday Nin horey loo Maxkamadeeyay
Maxkamadda sare ee Ciidamada Puntland ayaa Maanta oo Isniin ah xukun dil toogasho ku riday Nin lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa shabakad dhawaan lagu Maxkamadeeyay Magaalada Gaalkacyo, kuwaasi oo ka tirsan Al-shabaab.
Cabdirisaaq Axmed Buraale ayaa lagu eedeeyay inuu kamid ahaa shabakadii ka koobneyd 17-xubnood oo maalmo kahor Maxkamadda Puntland ku riday xukun dil toogasho ah, kadib markii lagu helayo inay ka dambeeyeen dilal iyo weeraro Gaalkacyo ka dhacay saddexdii sanno ee ugu dambeeyay.
Eedeysane Buraale oo horey Maxkamada sare ugu xukuntey xabsi daa’in ayaa Xafiiska xeer ilaalintu ka qaatey Dib u eegis taasoo sababtay in dil lagu xukumo, sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee Ciidamada Puntland.
17-xubnood oo ka tirsanaa Al-shabaab ayaa Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Gobolka Mudug ee maamulka Puntland ku riday xukun dil toogasho ah, halka mid kalena lagu xukumay xabsi daa’in.
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro iyo qaraxyo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta badan Mas’uuliyada falalkaas dhacay sheegtay Al-shabaab.
Maqaal horeDoorashada Itoobiya oo Maanta loo dareeray iyo Amniga oo la adkeeyay
Maqaal XigaMaxkamadda Maxkamadda oo shaacisay Magacyada dadkii dilay Sheekh Cali Dheere